Kusarudzwa kwemanovel epedyo
Ongororo yenyaya dzepedyo
Chiedza cheZhizha, uye Mushure meHusiku, naJón Kalman Stefánsson
Kutonhora kunokwanisa kuomesa nguva munzvimbo yakaita seIceland, yakatoumbwa nehunhu hwayo sechitsuwa chakamiswa muNorth Atlantic, yakaenzana pakati peEurope neAmerica. Ndeipi yave tsaona imwe chete yenzvimbo kurondedzera zvakajairwa nekusarudzika kune vamwe vese...
The Island of the Lost Tree, naElif Shafak
Muti mumwe nomumwe une zvibereko zvawo. Kubva pamuti weapuro nemiedzo yayo yekare, zvakakwana kutikanda kunze kweparadhiso, kune muonde unozivikanwa nemichero yawo isingawanzoitiki yakatakurwa nekufananidzira pakati peerotic uye tsvene, zvichienderana nekutarisa kwaunoita uye, pamusoro pezvose, zvichienderana ndiani arikuzviona... Nyaya iri mu…
3 akanakisa Anne Tyler mabhuku
Mazuva ese inzvimbo yakajairika kune wese munhu. Kubva pamikova yemukati meimba yega yega, kubviswa kwekuvanzika kwechinguva, mavara atiri isu tave kunyatso kuva nechokwadi chehupenyu. Uye Anne Tyler anoisa basa rake kurudzi irworwo rwekuwedzera kuziva, iyo iyo ...
Kutamba nemoto, naDaniel Saldaña
Kusanganazve kunogona kuvava semukana usina maturo wechipiri murudo. Shamwari dzekare dzinovavarira kutorazve nzvimbo isisipo kuti iite zvinhu zvisingachaiti. Kwete chero chinhu chakanyanya, nekuda kwekuti pasi pasi havagutse, asi vanongotsvaga ...
Vabereki Vari Kure, naMarina Jarre
Paive nenguva apo Europe yaive nyika isina kugadzikana yekuzvarirwa, umo vana vakauya munyika pakati pekushuva, kudzura, kupatsanura uye kunyangwe kutya kwevabereki vavo. Nhasi nyaya yatamira kune mamwe matunhu epasi. Mubvunzo ndewokutora iwo maonero ...
Kudenga Kumusoro kwedenga, naNathacha Appanah
Ndianizve uyo asina kana kuburitsa musodzi pamwe nekuuya kwaMarco kutsvaga mai vake. Ino nguva zera rem protagonist, Lobo, raizomuunza padyo neHolden Caulfield (hongu, Salinger wechidiki ane mukurumbira wekuyaruka). Uye chinhu ndechekuti zvakare chimiro chaamai ...
Chipiri Chipiri, naEl Chojin
Nyaya yega yega inoda zvikamu zviviri kana paine mhando yekubatanidza ichawanikwa, zvinova zviri mune chero hupamhi hunopinda mundima yekuteedzera kwepamoyo. Hausi iwo mubvunzo wekuburitsa iyi mhando yezvinyorwa zviviri pamberi pemunhu wekutanga. Nekuti zvakare ...
Kushaya, naAlberto Fuguet
Pane nguva apo mutauro unoperekedza nyaya neicho chakareruka. Nekuti kutsvaga munhu akatsakatika hazvidi rwiyo kana hunyanzvi. Rondedzero kushushikana kunoita kuti iyi nzira yekusangana kwako pachako ive verisimilitude uye padyo kutiswededza padyo kune vese ...
Peji1 Peji2 ... Peji10 Zvadaro →